Network Engineering Marketplace
Network တစ်ခု ချိတ်ဆက်ဖို့ လိုအပ်သည့် IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server များကို သေသေချာချာ ရှင်းပြထားပါသည်။ Computer name, Workgroup, User Account များကိုလည်း အသေးစိတ် နားလည်အောင် ရှင်းပြထား ပါသည်။ Networking အတွက် အဓိက Hardware များဖြစ်သည့် Switch, Router, Access Point, CPE အကြောင်းများကိုလည်း အသုံးပြုတတ်အောင် ရေးသားတင်ပြထားပါတယ်။
Cable Network တွေ လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ နောက်ထပ် ထပ်မံ လေ့လာရမည့် ပညာရပ်ကတော့ ကြိုးမဲ့ network ခေါ် Wireless Network ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတွေအားလုံးဆီက Data တွေ Command တွေ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းဖို့ Cable ကြိုးတွေ အစား လေထုကိုပဲ Medium ကြားခံနယ်အဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ လေထုထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မမြင်နိုင်တဲ့ Radio လှိုင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ Radio Wave တွေပေါ်ကနေ သက်မှတ်ထားတဲ့ Frequency (ကြိမ်နှုန်း) အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wireless Signal တွေ ပို့လွှတ်ပါတယ်။
Networking လေ့လာမည့်‌ ကျောင်းသား/သူများအတွက် ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ရှိဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ရယ်။ ကွန်ပျူတာ (၂) လုံးထက်ပိုရှိဖို့ ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်က ရှိရှိသမျှ နတ်ဘုရား သိကြားတွေ ကူညီစောင်မ ကြည့်ရှုမှပဲ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဲဒီတော့ ကွန်ပျူတာတွေ အများကြီးရဖို့ ဒီလို လုပ်ရအောင်။ VMware Workstation Software ကို စက်ထဲမှာ ထည့်သွင်း Install လုပ်မယ်။ အဲဒီကွန်ပျူတာထဲမှ ကိုယ်ကြိုက်သလောက် ကွန်ပျူတာ အတုတွေ တည်ဆောက်မယ်။ ကွန်ပျူတာ အတု တစ်လုံးချင်းစီမှာ Windows 7, Windows 10, Ubuntu, Fedora, CentOS, Android, Kali OS စတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ရှိသမျှ OS တွေ အကုန်ထည့်ပြီး စမ်းသပ်မယ်။ Network ချိတ်ကြည့်ကြမယ်လေ။ ဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲမှာပဲ Server ထိုင်မယ်။ Client လုပ်မယ်။ Network Testing တွေ မှန်သမျှ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးထဲကနေ လေ့ကျင့်လို့ ရသွားပြီလေ။ မိုက်တယ် မို့လား? အဲဒီလို လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကို ဒီ သင်ခန်းစာခွေမှာ မြန်မာလို Step By Step သင်ကြားပို့ချထားပါတယ်။
NetStation or Thin Client or Terminal သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးထဲကို ပွားသုံးခြင်း
VMware Workstation ကတော့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးထဲကို Logically ပွားသုံးတာပါ။ အခု ရှင်းပြမည့် Thin Client, Netstation ကတော့ Physically ပွားသုံးတာပါ။ ပွားသုံးမည့် ကွန်ပျူတာတွေမှာ System Unit ပုံးကြီး မလိုအပ်တော့ဘဲ Monitor, Keyboard, Mouse သာ လိုအပ်ပါတယ်။ ပါဝါစား သက်သာသွားတာကြောင့် သင်တန်းကျောင်းတွေ၊ ရုံးတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေမှာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Thin Client အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်တွေ အများကြီး လျော့ချလာနိုင်ပြီး အမြတ်ငွေ များများ ကျန်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့ချချက်မှာ ကွန်ပျူတာ ပွားသုံးနည်းကို Step By Step သင်ကြားပို့ချထားပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတွေကို အဝေးကနေ လှမ်းပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ Remote Access နည်းပညာတွေကို ဒီ Network Engineering Training DVD မှာပဲ Step By Step သင်ကြားပို့ချထားပါတယ်။
This action required Login.
Excel ဖြင့် အဆင့်မြင့်တွက်ချက်နည်းများ
Wai Phyo Aung AIT Computer Co.,Ltd.
အမှတ်(၄၅-၃/က), ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းနှင့်အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်, နွားထိုးကြီး ( 05261 ) မြင်းခြံ, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး,